जारी विश्वकपमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी
इंग्ल्यान्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकपको क्रिकेट अन्तरगत लिग चरणको खेल सकिएको छ । सहभागी १० टिमले लिगका ९ खेल खेली सकेका छन् । र सेमिफाइनमा पुगेका चार टोलीको सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वीको पनि टुङ्गो लागेको छ ।
प्रकाशित: २०७६-०३-२३ ०७:१२:३७
एजेन्सी- इंग्ल्यान्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकपको क्रिकेट अन्तरगत लिग चरणको खेल सकिएको छ । सहभागी १० टिमले लिगका ९ खेल खेली सकेका छन् । र सेमिफाइनमा पुगेका चार टोलीको सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वीको पनि टुङ्गो लागेको छ ।
पहिलो सेमिफाइनमा भारतले न्यजिल्यान्डको सामना गर्दै छ भने अष्ट्रेलियाले आयोजक राष्ट्र इंग्ल्यान्डको सामना गर्दै छ । हेरौ जारी विश्वकपमा लिग चरणका खेलहरुमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीहरु को को हुन् ।
१. मिचेल स्टार्क (अष्ट्रेलिया)
अष्ट्रेलियाका तिब्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क जारी विश्वकको लिग चरणका खेल सकिदा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पहिलो स्थानमा छन् । उनले ९ खेल खेल्दै २६ विकेट लिएका छन् । कुल ८३.२ ओभर बलिङ गर्दै ४३२ रन खर्चेर २६ विकेट लिएका हुन् ।
उनले दुई खेलमा समान ४-४ विकटे लिएका थिए भने दुई खेलमा ५-५ विकेट लिएका थिए । उनले वेस्टइन्डिज र न्युजिल्यान्डविरुद्धको खेलमा ५ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै श्रीलंका र इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा समान ४-४ विकेट लिएका थिए ।
२. मुस्ताफिजुर रहमन (बंगलादेश)
बंगलादेशका बलर मुस्ताफिजुर रहमन जारी विश्वकपको लिग चरणका खेल सकिदा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा छन् । उनले ८ खेलमा ७२.१ ओभर बलिङ गर्दै ४८४ रन खर्चेर २० विकटे लिएका हुन् ।
रहमनले जारी विश्वकपको दुई खेलमा समन पाँच पाँच विकेट लिएका थिए । उनले पछिल्ला दुई खेल भारत र पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा समान पाँच पाँच विकेट लिएका हुन् । उनको औसत २४.२० छ भने इकोनोमी ६.७० छ ।
३.लोकी फेर्गुसन (न्यजिल्यान्ड)
न्यजिल्यान्डका लोकी फेर्गुसन सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको चौंथो स्थानका छन्। उनले ७ खेल खेल्दै १७ विकेट लिएका छन् । उनले ६३.४ ओभरमा ३१६ रन खर्चदै १७ विकेट लिए । उनीसँगै १७ विकेट लिने पाकिस्तानका मोहम्मद आमिर छन् ।
उनले ८ खेलमा ७३ ओभर बलिङ गर्दै ३५८ रन खर्चेर १७ विकेट लिएका हुन् । आमिरले अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा ३० रन खर्चेर पाँच विकेट लिएका थिए ।
त्यस्तै इंग्ल्यान्डका जोफ्रा आर्चरले पनि ९ खेलमा १७ विकेट लिएको छन् । ८०.५ ओभर बलिङ गरेका आर्चरले ३८७ रन खर्चेका छन् । भारतका तिब्र गतिका बलर जसप्रित बुमराहले ८ खेलमा १७ विकेट लिएका हुन् ।
४. शाहीन शाह अफ्रीदी (पाकिस्तान)
पाकिस्तनका शाहीन शाह अफ्रीदी पाँचौ स्थानमा छन् । उनले मात्र ५ खेलमा १६ विकेट लिएका छन् । ४७.१ ओभर बलिङ गरेका अफ्रीदीले २३४ रन खर्चेर १६ विकेट लिएका हुन् । उनले बंगलादेशविरुद्धको खेलमा ३५ रन खर्चेर ६ विकेट लिए । त्यस्तै अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा ४ विकेट लिएका थिए ।
उनीसँगै इंग्ल्यान्डका मार्क वुडले पनि १६ विकेट लिएका छन् । ८ खेल खेलेका वुडले ७०.४ ओभर बलिङ गर्दै ३६९ रन खर्चेर १६ विकेट लिएका हुन् ।
अन्यमा न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्टले ८ खेलमा १५ विकेट लिएका छन् । त्यस्तै भारतका मोहम्मद शामीले मात्र चार खेलमा १४ विकेट लिएका छन् । उनले ३५.१ ओभर बलिङ गर्दै १९३ रन खर्चेर १४ विकेट लिएका हुन् ।
दक्षिण अफ्रीकाका क्रिस मोरीस, श्रीलंकाका लाथीस मलिङ्गा, अष्ट्रेलियाका पात कुमिन्स र बंगलादेशका मोहम्मद र्सैफुदिनले समान १३-१३ विकेट लिएका छन् ।
त्रिदशीय टी–ट्वान्टी सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित
ट्राई सिरिज : मलेसियाविरुद्ध नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो
ग्रिनवुड चम्किँदा युनाइटेडको सहज जित
ला लिगा उपाधि होड : एट्लेटिकोको सानदार जित, बराबरीमा रोकियो रियल
सिरी एमा युभेन्टसको अर्को पराजय
धवनको बिस्फोटक ब्याटिङमा दिल्लीले पञ्जाबलाई हरायो
दसौं महाधिवेशनका लागि एमालेको ६ महिने कार्ययोजना पारित
ओली आज इन्डियाको तुमशरणम् भइसके : देउवा
लुम्बिनी सरकारमा नयाँ ट्विस्ट : अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै मन्त्री नियुक्त
१ गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान
२ दसौं महाधिवेशनका लागि एमालेको ६ महिने कार्ययोजना पारित
३ ओली आज इन्डियाको तुमशरणम् भइसके : देउवा
४ लुम्बिनी सरकारमा नयाँ ट्विस्ट : अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै मन्त्री नियुक्त
५ १२ सय ८१ कोरोना संक्रमित थपिए, ९ जनाको मृत्यु